जमराको जुसले क्यान्सर निको हुन्छ? :: सन्जिब बगाले र विवेक राई :: Setopati
जमराको जुसले क्यान्सर निको हुन्छ? कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर केसी भन्छन्- यसलाई बन्द गर्नुपर्छ
सन्जिब बगाले र विवेक राई काठमाडौं, चैत २
तस्बिर : सञ्जिब बगाले/सेतोपाटी
कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरभित्र बिहान सबेरै मर्निङ वाक वा योग गर्न जाँदा ठाउँठाउँमा टेबुलमा झुन्ड्याइएका बोर्ड देखिन्छन्। तिनमा लेखिएको हुन्छ- क्यान्सर, थाइराइड तथा मोटोपन, ग्याष्ट्रिक, बाझोपनलगायत २२ रोगका लागि जमराको जुस अमृत समान जमराको जुसमा भिटामिन ए, बी,सी,ई,क्याल्सियम,फोसफोरस,सोडियम,आइरन,जिंक र प्रोटिनसमेत पाइन्छ। यस्तो लाग्छ, जमराको जुसले निको नहुने कुनै बिराम छैन वा जमराको जुस खानेलाई कुनै रोग लाग्दैन।
बोर्डमा लेखेको पत्याएरै होला दिनहुँ जमराको जुस पिउनेको भीडभाड हुन्छ। पछिल्लो समय काठमाडौंवासीमा बिहान जमराको जुस पिउने लहर चलेको छ। यसको व्यापार पनि बढिरहेको छ।
ललितपुरकी कमला बस्नेत एक वर्षदेखि कीर्तिपुरमा जमराको जुस बेचिरहेकी छन्। उनका अनुसार जाडोभन्दा गर्मीमा व्यापार झन् बढी हुन्छ।
जुसले कसैलाई निको भएको तर कसैलाई भने ठीक नगरेको उनको अनुभव छ।
‘यसले ठीक नगर्ने भन्ने होइन। क्यान्सर लागेकोसमेत ठीक भयो भनेर मलाई धन्यवाद दिएका पनि छन्,’ उनले भनिन्,‘एक महिनासम्म खायो भने ग्याष्ट्रिक र १५ दिनसम्म खायो भने प्रेसर ठीक हुन्छ।’
कीर्तिपुरमा भेटिएका समरबहादुर कार्कीले सुगर र रक्तचाप ठीक हुन्छ भन्ने सुनेपछि जमराको जुस पिउन थालेको बताए। जुस पिएपछि शरीर हल्का भएको उनको दाबी छ।
गहुँ र जौंलाई माटोमा मिसाएर अलग-अलग ठाउँमा राखेको ९/१० दिनमा जुस बनाउन मिल्ने जमरा तयार हुने बस्नेतले बताइन्।
आफूले जुस बनाउने तरिका युट्युबबाट सिकेको उनले बताइन्।
साँच्चै जमराको जुसले बिराम निको हुन्छ?
वनस्पतिजन्य औषधी विज्ञ अच्युत अधिकारीका अनुसार गहुँका जमराका फाइदा र बेफाइदाबारे धेरै अध्ययन भएका छन्। तर जौंका जमराबारे त्यस्तो अनुसन्धान पाइँदैन।
औषधी जमराको जुसमा सबैभन्दा धेरै वनस्पतिजन्य औषधी पाइने उनले बताए।
‘जमराको जुस रक्तअल्पताका बिरामीलाई निकै उपयोगी छ। यो हरियो रगत नै हो। जमराको जुसमा सुक्ष्म पोषण तत्वसमेत हुन्छ,’उनले भने,‘जमराको जुसले पाँचन प्रणालीलाइ ठीक गर्छ। दाँतको सुरक्षा गर्छ भने किड्नी, मृगौला र पिसाबसम्बन्धी रोगसमेत लाग्न दिँदैन।’
उनका अनुसार १०० ग्राम जमरामा पाइने भिटामिन र मिनरल्स २२ किलोग्राम सागमा पाइने जति हुन्छ।
यो कुरा अनुसन्धानले प्रमाणित गरिसकेको उनले बताए।
तर जथाभावी जमरामाको जुस पिउँदा केहीलाई हानी पनि हुन सक्छ।
‘यसले किड्नी कलेजोलाई राम्रो गर्ने हो तर रोग लागिसकेको छ भने थप हानी पनि गर्न सक्छ। त्यसैले कसले खानेमा होसियारी भने अपनाउनु पर्छ,’ अधिकारीले भने।
कलेजो रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर सुधांशु केसीले भने जमराको जुस खाएर धेरै रोग निको हुन्छन् भन्नु खतरनाक भ्रम रहेको बताए।
‘जमराको जुसको लहर आएको यसको अनावश्यक रूपमा प्रचार प्रसार गरेर हो। यो खाँदा स्वस्थ मानिसलाई असर नदेखिने कारणले पनि यसको प्रयोग बढेको हो,’ केसीले भने,‘यसको जुस हानिकारक नै हो भनेर त म भन्दिनँ, तर एउटै बनस्पतिले धेरै रोगको उपचार हुन्छ भन्नु ठग्नुसरह हो।’
जमराको जुस खाँदा कसैले व्यायाम पनि गर्‍यो अनि चिल्लो गुलियो पनि खाएन भने उसको सुगर ठीक भयो भने पनि त्यसको जस जमराको जुसले पाउने गरेको उनले बताए।
‘जुस बेच्ने ठाउँमा क्यान्सर निको हुन्छ भनेर लेखिरहेको हुन्छ। जमराको जुस खाँदैमा सबैखाले क्यान्सर निको होला? यस्तो अनर्गल प्रचार गर्न पाइन्छ?,’ उनले भने,‘छालाको क्यान्सरको औषधी एउटा छ। लिभरको क्यान्सरको औषधी एउटा छ। फोक्सोको क्यान्सरको ओषधी अर्कै छ। एउटै जमराको जुसले सबै क्यान्सर ठिक हुने हो भने बनिरहेको क्यान्सर अस्पताल बन्द गरे भएन?’
जमराबाट सबै उपचार हुन्छ भनेर भ्रमपूर्ण प्रचार गर्नु गलत भएको भन्दै उनले जमराको जुसले रोग निको पार्छ भनेर विश्वास नगर्न समेत आग्रह गरे।
जमराको जुसमा केही फाइदा गर्ने तत्व भए पनि यसलाइ व्यवस्थित गरेर मात्रै खानु पर्ने तर मेसिनमा पेलेर जथाभावी खान नहुने उनको सुझाव छ।
‘सरकार र सम्बन्धित निकायले पहल नगरेसम्म यो काम रोकिँदैन। किनकी कोही भन्छन् प्रेसर ठीक गर्छ कोही भन्छन् लिबर ठिक गर्छ। पहिलाभन्दा त घटिरहेको छ।,’ उनले भने, ‘हजार रोग निको पार्ने अमृत यसमा हुनै सक्दैन भन्नु गलत हो। यसलाई बन्द गर्नै पर्छ।’
प्रकाशित मिति: आईतबार, चैत ३, २०७५, ०१:१४:००